साम्राज्ञी भन्छिन्, ‘म डराउँदिनँ, अरुलाई गुहार्दिनँ , आफैं प्रतिवाद गर्छु’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफूमाथिको दुर्व्यवहारबारे बोल्दा उल्टै उनकै विरुद्ध अभिनेता/निर्देशक भुवन केसीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरे, साउन ९ गते । त्यसअगाडि भुवन र उनका नजिकका फिल्मकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि अनेक आक्षेप लगाएका थिए ।
मुस्ताङको सुटिङ सकेर पोखरा आएपछि भुइचालो गयो, मसँग बस्दै आउनुभएको साथी प्रनिका भण्डारी घर जानुभयो, हामीलाई विदा दिइएन, म एक्लै परें । रातको त्यस्तै ११ बजेतिर बत्ती निभाएर सुतेको थिएँ । केहीबेरमा कोठामा कोही खाली खुट्टा हिँडेकोजस्तो आवाज आयो, म तर्सें, एकदमै डराएँ, ‘ओम...’ जप्दै निदाउन खोजें । एक्कासी मेरो पेटमा कसैले हात राखेको जस्तो भयो, मैले पनि त्यहाँ हात लगें, त्यो हातलाई मेरो छातले छोप्यो । म जुरुक्क उठें, एकदमै खस्रो हात थियो । अनुहार चिन्न खोजें तर अध्याँरो भएकाले देख्नै सकिनँ । होचो थियो, गन्जी र कट्टुमात्र लगाएको थियो । म रुँदै कराउन थाललेपछि दोड्दै झ्यालबाट भाग्यो । त्यतिबेला १६ वर्षकी थिएँ, आधा घण्टा बाहिर निस्कनै सकिनँ, झ्यालबाट आएर चक्कुले हान्छ कि भनेर तर्सन थालें । बल्लतल्ल बाहिर निस्कें, अरुलाई उठाउन खोजें, कोही उठेनन् । अनि रवि मामा (फिल्मका एक निर्माता) लाई उठाएँ, एकछिनमा प्रहरी आएर त्यो मान्छेको हुलिया सोध्यो । म डराएको भएर त्यो रात म अनमोलकी काकीसँग सुतें । जीन्दगीमा पहिलोपटक त्यस्तो घटना भोग्नु परेकाले भोलिपल्ट पनि ‘फ्रेस’ हुन सकिनँ, को होला त्यो मान्छे भनेर दिमागमा खेलिरहन्थ्यो । तैपनि सुन्निएको अनुहारमै मेकअप गरियो । बाहिर निर्देशक (भुवन) हुनुहुँदोरेहेछ, मेरो नामले बोलाएर ‘तेरो रुममा हिजो को आको, तलाई रेप गर्न त आएको होइन ? हाहाहा...’ भन्दै गाडीभित्र छिर्नुभयो । त्यो पल म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । मैले इन्स्टाग्रामको भिडियोमा कसैको नाम नलिई त्यही भोगाई पोखेको थिएँ ।
कतिपय फिल्मकर्मीले तपाईले सुटिङमा दुख दिएको दुखेसो गर्छन् नि...
तर, घमण्ड बढ्यो भनेर तपाईंसँग तर्कने फिल्ममेकर पनि उत्तिकै छन् नि...
कतिपयले अब तपाईंले फिल्म पाउनुहुन्न भनिरहेका छन् । के लाग्छ ?
यही हप्ताभित्र म दुई वटा फिल्ममा अनुबन्ध हुँदैछु, किनभने उहाँहरुको सोचाई राम्रो छ । म हिट हुन फिल्म खेल्दिनँ, अभिनय मन पराउँछु, त्यसैले फिल्म खेल्छु ।
तर, पटक–पटक विवादमा आउँदा आफ्नो छविमा असर पुग्छ भन्ने डर लाग्दैन ?
अहिले त मेरो फ्यानले मलाई साथ दिइरहनुभएको छ । बुझ्ने मान्छेले अब सहेर बस्नु हुन्न भनेर हौसला दिनुभएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:३४
नबिलको स्क्यान एन्ड विड्र सेवा
काठमाडौँ — नबिल बैंकले ‘स्क्यान एन्ड विड्र’ सुविधाको सुरुवात गरेको छ ।
मंगलबारबाट सुरु भएको योजनाअन्तर्गत ग्राहकले चेकको प्रयोग नगरी क्यूआर कोड स्क्यान गरेर बैंक काउन्टरबाट दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्म झिक्न सक्नेछन् । बैंकले यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका सबै शाखाबाट उपलब्ध गराएको छ । यो सेवालाई छिट्टै देशभरिका शाखामा पनि उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:१७